Cadho joogto ah oo ka socota Lubnaan .. – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Cadho joogto ah oo ka socota Lubnaan ..
Cadho joogto ah oo ka socota Lubnaan ..
Dhaqdhaqaaqyada dibadbaxyada ee ka soo cusboonaaday caasimadda Lubnaan, Beyruut, iyo magaalooyin kale, Axaddii; Isagoo cambaareynaya sii socoshada xaaladaha nolosha, oo ka mid ah dhibaatooyinka dhaqaale ee ugu xun ee dalka ka jira tan iyo dhammaadkii dagaalkii sokeeye ee 1990.
Sida uu sheegayo wariyaha Anatolia, daraasiin dad ah ayaa banaanbax ka dhigay wadada weyn ee u dhaw magaalada Sports ee Beirut, waxayna ku dhawaaqayeen halku dhigyo ay ku cambaareynayaan xaaladaha dhaqaale ee sii xumaanaya.
Dibadbaxayaasha ayaa xiray labo waddo oo waaweyn, midda koowaad waxay isku xireysaa caasimadda iyo koonfurta dalka, tan kalena waxay ku xirneysaa woqooyiga.
Halka Wakaaladda Wararka Qaranka (sarkaal) ay ku warantay in mudaaharaadayaashu ay isku dayeen inay xoog ku galaan albaabka birta ah ee laga soo galo dhismaha dawladda hoose ee Sidon (koonfurta), laakiin ciidanka ayaa ka hor istaagay oo ka saaray goobta.
Dibadbaxayaasha ayaa markii dambe taayaro dab qabadsiiyay waxayna xireen jidadka waaweyn ee magaalada, iyagoo cambaareeyay xaalada nololeed ee sii xumaaneysa iyo hoos u sii dhaca ku yimid qiimaha lacagta Lubnaan (pound), sida ay sheegtay wakaaladda.
Axadii, lira waxay diiwaangelisay sii xumaan, maxaa yeelay sarrifka doollarka Mareykanka ee is barbar socda (aan rasmi ahayn) wuxuu ka gudbay marinka 17,500 oo rodol, marka loo barbardhigo 1,507 rodol Bangiga Dhexe ee Lubnaan.
Magaalada Tripoli (waqooyiga), boqolaal mudaaharaadayaal ah ayaa isugu soo baxay isu soo baxyo caan ah oo ku wajahan guryaha siyaasiyiinta ku nool magaalada; In la cambaareeyo xaaladaha nololeed, lana dalbado isla xisaabtan kuwa mas’uulka ka ah burburka dhaqaale.
Sabtidiina, Tripoli wuxuu goobjoog ka ahaa iska hor imaadyada u dhexeeya mudaaharaadayaasha iyo ilaalada qaar ka mid ah siyaasiyiinta, taas oo horseeday dhicitaanka 5 banaanbaxayaal, qaar ka mid ah la toogtay, intii lagu jiray mudaharaadyo careysan oo ka dhacay magaalada, kuwaas oo ay dhex galeen rabshado.
Dhanka kale, ciidanku wuxuu ku dhawaaqay, fiidnimadii Sabtida, in 10 askari ay ku dhaawacmeen qaraxii bambooyin dhawaq ah oo ay tuurayeen rag dhalinyaro ah oo watay mootooyin dhanka ciidan milatari ah oo ka shaqeynayay sugida amniga inta lagu guda jiray mudaharaadyada ka dhacay Tripoli.
Dibadbaxyada caanka ah ayaa sii kordhay tan iyo bilowgii toddobaadkan. Sababtoo ah hoos udhac dheeraad ah oo kuyimid lacagta wadanka marka loo eego doolarka, marka loo fiiriyo qalalaase dhaqaale oo aad u daran oo hareeyay wadanka tan iyo dabayaaqadii sanadkii 2019, taasoo keentay sicir barar dhaqaale iyo koror aan horay loo arag oo heerka saboolnimada ah.
Xaaladda waxaa uga sii daray khilaafaadka siyaasadeed ee hor istaagay dhismaha dowlad cusub, si ay ugu guuleysato dowladda hadda jirta ee ilaaliyaha ah, ee uu madaxda ka yahay Xasan Diab, oo iscasilay Ogosto 10, 2020, 6 maalmood ka dib markii musiibo weyn ay ka dhacday dekedda Beyruut.
Previous articleDEG DEG:Jadwalka doorashada Soomaaliya oo la soo saaray:
Next articleMaxkamada sare ee Somaliland oo laashay Dhamaan dacwadihii Musharixiinta
Guddoomiyaha Badhan oo ka Hadlay Khasaare ka Dhashay Roobab ka Da’ay...
Ereteriya waa Dalka kaliya ee Afrikaanka ah ee aan laheyn kiis...